Xubno ka tirsan Al-shabaab oo lagu dilay duqeyn ka dhacday gobolka Jubadda Dhexe – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Xubno ka tirsan Al-shabaab oo lagu dilay duqeyn ka dhacday gobolka Jubadda Dhexe
Qoraal kasoo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in 26-kii bishaan duqeyn dhinaca cirka ah ay ciidamadooda ka geysteen gudaha Soomaaliya, gaar ahaan degmada Jilib ee gobolka Jubadda Dhexe.
Waxaa qoraalkaasi lagu xusay in duqeyntaasi lagu dilay labo ka tirsan Al-shabaab, halka mid kale la dhaawacay, iyadoo aanay jirin wax dad rayid ah oo wax kasoo gaaray duqeyntaasi.
Duqeyntaasi ayaa waxaa si wadajir u geystay ciidamo ka tirsan Mareykanka oo kaashanaya kuwa dowladda federaalka Soomaaliya.
Saraakiisha ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa sheegay inay sii wadi doonaan taageeradda ay siinayaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, si meesha looga saaro kooxaha argagixisada ee Al-shabaab.
Kooxda Al-shabaab ayaa la sheegay inay khatar ku yihiin xasiloonida iyo nabad-gelyadda dalka Soomaaliya, iyadoona duqeyntaasi ay ahayd tii lixaad oo ay ciidamada Mareykanka ka fulliyeen qeybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.